के रुपैयाँ-पैसा सबै किसिमका खराबीको जरा हो? वा “पैसाको प्रेम”?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अलुर अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा काजाक काजाक (अरबी) काम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोरियन क्याटालान क्यानगोन्डे क्रोएसियन क्वान्यामा क्षोसा गा गून ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चेक जर्जियन जर्मन जापटेक (क्युआटोनी) जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश ताजिकी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी (शाहमुखी) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाटाक (टोबा) बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माया मालागासी म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
होइन। अक्सर मानिसहरू यसो भन्‍ने गर्छन्‌: “रुपैयाँ-पैसा सबै किसिमका खराबीको जरा हो।” तर बाइबलले पैसा हानिकारक हो अथवा पैसा नै सबै नराम्रो कुराको जड हो भनेर पनि बताउँदैन। वास्तवमा बाइबल यसो भन्छ: “रूपियाँ-पैसाको प्रेमनै सबै किसिमका खराबीको जरा हो।” *—१ तिमोथी ६:१०, पवित्र बाइबल (RV), गाढा अक्षर हाम्रो।
बाइबलले पैसाबारे के बताउँछ?
बाइबलले किन पैसालाई प्रेम नगर्न चेतावनी दिन्छ?
बाइबलमा पैसाबारे दिइएको सल्लाहबाट हामी कसरी लाभ उठाउन सक्छौँ?
पैसाबारे बाइबल पदहरू
बुद्धिमानीपूर्वक पैसा चलाउँदा त्यो उपयोगी हुन्छ र त्यसले “सुरक्षा” पनि दिन्छ भनेर बाइबल बताउँछ। (उपदेशक ७:१२) साथै बाइबलले मन खोलेर दिने मानिसहरूको प्रशंसा गर्छ, जस्तै, उपहारस्वरूप पैसा दिँदा।—हितोपदेश ११:२५.
अर्कोतर्फ बाइबलले पैसा कमाउनुलाई नै आफ्नो जीवनको मुख्य लक्ष्य बनाउनदेखि होसियार गराउँछ। बाइबल यसो भन्छ: “तिमीहरूको जीवनशैली पैसाको प्रेमबाट मुक्‍त होस्‌, अहिले आफूसित भएका कुराहरूमा सन्तुष्ट होओ।” (हिब्रू १३:५) यसबाट हामी पैसालाई बढ्‌तै महत्त्व दिँदै त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन भन्‍ने पाठ सिक्न सक्छौँ। बरु खाने, लाउने र बस्नेजस्ता भौतिक आवश्‍यकताहरू पूरा हुँदा त्यसमै सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ।—१ तिमोथि ६:८.
लोभी मानिसहरूले अनन्त जीवन पाउनेछैनन्‌। (एफिसी ५:५) किनकि लोभ गर्नु भनेको एक किसिमको मूर्तिपूजा वा झूटो उपासना हो। (कलस्सी ३:५) साथै लोभी मानिसहरू आफूले चाहेको कुरा हरहालतमा पाउन सही कुराहरूलाई बेवास्ता गर्छन्‌। “रातारात धनी बन्‍न खोज्ने मानिस निर्दोष रहिरहन सक्दैन” भनेर हितोपदेश २८:२० मा बताइएको छ। तिनीहरू लोभको कारण डर-धम्की, जालसाजी, अपहरण वा हत्याजस्ता अपराध गर्ने हदसम्म पनि पुग्न सक्छन्‌।
पैसाको प्रेमले खराब काम गर्न नलगाए तापनि त्यसले नकारात्मक नतिजाहरू भने निम्त्याउन सक्छ। बाइबल यसो भन्छ, “जो हरहालतमा धनी बन्‍न चाहन्छन्‌, तिनीहरू प्रलोभन र पासोमा पर्छन्‌ अनि अनेकौँ मूर्खतापूर्ण र हानिकारक इच्छाहरूमा फस्छन्‌।”—१ तिमोथि ६:९.
हामीले पैसाको लागि नैतिक अनि आध्यात्मिक मूल्यमान्यतासित सम्झौता गरेनौँ भने हामीले आत्म-सम्मान गुमाउने छैनौँ। साथै परमेश्‍वरको अनुग्रह र साथ पनि पाउनेछौँ। मनैदेखि परमेश्‍वरलाई खुसी पार्न चाहनेहरूसित उहाँले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ: “म तिमीलाई कुनै हालतमा छोड्‌नेछैनँ र कहिल्यै त्याग्नेछैनँ।” (हिब्रू १३:५, ६) उहाँ हामीलाई यस्तो आश्‍वासन पनि दिनुहुन्छ “वफादार मानिसले प्रशस्त आशिष्‌ पाउँछ।”—हितोपदेश २८:२०.
उपदेशक ७:१२: “रुपैयाँ-पैसाले सुरक्षा दिन्छ।”
अर्थ: बुद्धिमानीपूर्वक पैसा चलाउँदा फाइदाजनक हुन सक्छ किनभने यसले केही हदसम्म सुरक्षा पनि दिन्छ।
लुका १२:१५: “मानिस जति नै सम्पन्‍न भए तापनि त्यसले उसलाई जीवन दिँदैन।”
अर्थ: पैसा हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन अनि यसले हाम्रो जीवन जोगाउन सक्दैन।
१ तिमोथि ६:१०: “पैसाको प्रेम सबै किसिमका हानिकारक कुराहरूको जड हो अनि यही प्रेमको पछि लागेर कोही-कोही विश्‍वासबाट तर्केका छन्‌ र थुप्रै पीडाले आफूलाई चोटैचोट पुऱ्‍याएका छन्‌।”
अर्थ: पैसा आफैमा गलत होइन। तर पैसालाई प्रेम गर्ने र त्यसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठान्‍ने मानिसहरूको जीवनमा समस्याहरू आउन सक्छन्‌। जस्तै: परिवार टुक्रिन सक्छ अनि काममै रातदिन घोटिँदा स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ।
हिब्रू १३:५: “तिमीहरूको जीवनशैली पैसाको प्रेमबाट मुक्‍त होस्‌, अहिले आफूसित भएका कुराहरूमा सन्तुष्ट होओ।”
अर्थ: हरहालतमा पैसा कमाउन दौडधूप गर्नुको सट्टा आफ्ना भौतिक आवश्‍यकताहरू पूरा हुँदा त्यसमै सन्तुष्ट हुनु बुद्धिमानी हो।
मत्ति १९:२४: “धनी मानिसलाई परमेश्‍वरको राज्यमा पस्नभन्दा त उँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्न नै सजिलो हुन्छ।”
अर्थ: येसुले भर्खरै मात्र एक जना धनी जवान मानिसलाई आफ्नो पछि लाग्न बोलाउनुभएको थियो। तर आफ्नो सम्पत्तिप्रति धेरै मोह भएकोले उसले त्यो निम्तो स्विकारेन। त्यसैले येसुले यो चेतावनी दिनुभयो। परमेश्‍वरलाई भन्दा धनसम्पत्तिलाई बढी महत्त्व दिने मानिसले अनन्त जीवन गुमाउने खतरा हुन्छ।
^ अनु. 1 यस पदलाई यसरी पनि अनुवाद गरिएको छ: “पैसाको प्रेम सबै किसिमका हानिकारक कुराहरूको जड हो।”
रोजगार र पैसा
शेयर गर्ने शेयर गर्ने के रुपैयाँ-पैसा सबै किसिमका खराबीको जरा हो?
ijwbq लेख १६६